UKUHAMBA ETRUMPLAND NGEED BALLS: LILIPHI IXESHA KUNYE NEJELO ELIKULO? IMALUNGA NANTONI - IRADIO TIMES - AMAXWEBHU
Kukuhamba nini eTrumpland ngeEd Balls kwiTV? Ndingayibukela phi kwaye imalunga nantoni?
Emva kokubamba intliziyo yoluntu ngexesha lokuDanisa ngokungqongqo kunye nokuKhululeka kwezeMidlalo eziKhulu, u-Ed Balls ubuyile, usifaka kubomi babo bamjonga uDonald Trump njengegorha lokwenyani laseMelika.
Iibhola zikwiphulo lokufumanisa ukuba-kwaye-iMelika yenziwa njani ukuba ibe nkulu kwakhona.
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga noluhlu lwamaxwebhu amatsha apha ngezantsi.
Umkhosi kaTata weminyaka engama-50 kwiTV: indlela i-BBC neGolide ebhiyozela ngayo iklasikhi yamahlaya
I-BBC ibhengeza ugqirha ophilayo obaleka imidlalo yamagumbi
Uphi uthotho olutsha lwehlaya likaSacha Baron Cohen Ngubani iMelika? Kumabonwakude?
Uthotho olunamacandelo amathathu Ukuhamba eTrumpland kuqala NgeCawa nge-29 kaJulayi nge-10 ngokuhlwa kwi-BBC2.
Kuyingozi ukuqala ekucingeni ukuba abavoti baphosakele.
Itreyila inikezela ukubonakala kokonwabisa kunye nokukhanyisa ukuba ubomi bunjani ngokwenene kwiindawo apho iTrump ithandwa kakhulu. Iibhola zibonisa ukuba kubaluleke kangakanani ukufunda malunga nabo baneembono ongavumelani nazo ngaphambi kokuba uzigxothe.
Owayesakuba lilungu lePalamente lezabaSebenzi kunye nesithunzela sengqonyela ye-Exchequer Ed Balls baqala uhambo oluya kwinqanaba elithathu lokuya kumazantsi eMelika ukuya kudibana nabavoti bakaTrump kwaye bazicwilise kwinkcubeko yabo.
Kananjalo nokubonelela ngokuzonwabisa ngentliziyo ekhanyayo ejikeleze ubomi babo athetha nabo, Iibhola zikwajongana noluhlu lwemicimbi kubandakanya ulawulo lwemipu kunye nemigaqo-nkqubo yokufudukela kwelinye ilizwe.
Belangazelela ukushukumisa ibala elijikeleze abaxhasi bakaTrump, Iibhola zixelele iLeeds Live ukuba abantu abaninzi baya kuthatha ukuba bayakhohliswa kwaye abayiqondi, okanye bayingozi kwaye bayingozi, kodwa sidibene nabantu abalungileyo, abaqhelekileyo.
Ndacinga ukuba emva konyaka wokuqala uTrump uza kuphulukana nenkxaso, kodwa khange siyifumane kwaphela kwaye ngekhe indothuse ukuba uphumelele ikota yesibini, wongeze watsho.
Ukusuka ekubeni yi-'British Bruiser 'kumnyhadala we-wrestling yalapha, ukuvumela ukuba itakwe, Iibhola zikulungele ukubeka konke emgceni wokuqonda ukuba kutheni aba bantu bemthanda kangaka uTrump. Usishiya nombuzo obalulekileyo ekufuneka siwuqwalasele: ngaba uyalibona ilizwe ngamehlo abo kunawakho?
ingqina lophononongo lotshutshiso
ipixie isika ubuso obusisikwere
iphuma nini avatar 2
akukho sibhakabhaka somntu ezinzulwini zobusuku ukukhululwa
ubuntu bezemidlalo be-bbc bonyaka wama-2020